Ugari neInvestment yeTurkey uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Sevhisi muTurkey ye:
● Kugara nekudyara muTurkey
● Ugari nekudyara kubva kuTurkey
● Visa yegoridhe muTurkey
● Pasipoti yechipiri kubva kuTurkey
● Ugari nekudyara kweTurkey nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents eU Citizenship neInvestment muTurkey uye Magweta e Citizenship kubudikidza Investment muTurkey uye nevaichinja kuti real estate Citizenship zvirongwa muTurkey vanoshanda pamwe chete kuchengetedzwa kwevatengi.
Citizenship kubudikidza Investment vamiririri Turkey kupa mabasa ugari kubudikidza inivhesitimendi muTurkey, Citizenship kubudikidza inivhesitimendi zvirongwa muTurkey, Citizenship kubudikidza inivhesitimendi chirongwa, yechipiri Citizenship kubudikidza inivhesitimendi muTurkey, hunyambiri Ugari nekudyara muTurkey, ugari uye ugari nekudyara muTurkey. Citizenship inogara nekudyara muTurkey, Citizenship nekudyara muTurkey, Citizenship nehurongwa hwekudyara muTurkey, Citizenship nehurongwa hwekudyara muTurkey, Residency nekudyara muTurkey, Residency nezvirongwa zvekudyara muTurkey, Residency nehurongwa hwekudyara muTurkey, wechipiri Kugara nekudyara muTurkey, huviri Kugara nekudyara muTurkey, kugara uye ugari nekudyara muTurkey, kugara uye ugari nekudyara muTurkey, zvirongwa zvehupfumi zvehupfumi muTurkey, Residency nehurongwa hwekudyara muTurkey, Residency nehurongwa hwekudyara muTurkey, wechipiri pasipoti muTurkey, yechipiri mapasipoti zvirongwa muTurk ey, yechipiri pasipoti chirongwa muTurkey, mbiri yechipiri pasipoti muTurkey, pekugara uye yechipiri pasipoti muTurkey, diplomatic yechipiri pasipoti muTurkey, yechipiri pasipoti nekudyara muTurkey, yechipiri ugari pasipoti muTurkey, yechipiri pasipoti chirongwa muTurkey, yechipiri pasipoti zvirongwa mu Turkey, visa yegoridhe muTurkey, vhiza dzegoridhe muTurkey, zvirongwa zvegoridhe zvevisa muTurkey, chirongwa chendarama vhiza muTurkey, yechipiri vhiza vhiza muTurkey, chechipiri vhiza vhiza chirongwa muTurkey, mbiri yegoridhe visa muTurkey, ugari uye vhiza yegoridhe muTurkey, kugara uye vhiza yegoridhe muTurkey, mugari vhiza mugari muTurkey, dhiza vhiza chirongwa muTurkey, goridhe vhiza zvirongwa muTurkey.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara muTurkey nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muTurkey yeCitizenship nekudyara: USD 250,000 (real estate)
Nhanganyaya Turkey uye Citizenship kubudikidza Investment
Dzidza zvakawanda nezveTurkey
Kutasva nyika yeEuropean neAsia, nzvimbo yakakosha yeTurkey yakapa kwakakosha mudunhu - uye chiremera pamusoro penzira yekuenda kuGungwa Dema.
Kufambira mberi kwevhoti yakavakirwa sisitimu uye hupfumi hwepamusika hwainge hwamira mushure mekufa kwaAtaturk muna 1938, uye mauto - achizviona semunyori wezvebumbiro - kakawanda akadzinga hurumende dzinoonekwa sedziri kuyedza hukuru.
Kubatana neEuropean Union kwave kuri kushuvira kwenguva refu. Hurukuro dzekunyora dzakatumirwa mu2005 asi dzakadzikira pamusoro pekusagadzikana kwechokwadi nezvekodhi reRusununguko rekodhi rekodhi.
Matipi Makuru Ekurarama muTurkey
1: Yakanaka Mari Management
Pane mukana wekuti chero chinhu chingakanganisa hupenyu hwako hutsva muTurkey, mari isingabatsiri inoitwa nevatungamiriri. Kubva pakutanga, ziva yako vhiki nevhiki, mwedzi kusvika mwedzi, uye mabhiri egore, uye tarisa muhurongwa hwekushandisa pamutengo wepakati wezvinhu zvakakosha. Pane mukana wekuti mari yako yausingazive semari yegore rinowedzera kushanda munzvimbo yemubhedha sezvo kusagadzikana kwekuchinjanisa chikero kuri pano neapo saYo-Yo. Iva anonzwisisa.
Chirongwa chekushandisa chevaviri vanogara munzvimbo yavo muDidim hachigare nemuroja muIstanbul, rinova iro guta rinodhura zvakanyanya muTurkey. Chimwe chikamu chikuru chemari ndiyo mari-yepamusoro yemari kubva kuaccount account. Kazhinji 10%, iyi inzira isinganzwisisike yekuvaka yako hombe zviwanikwa zvisina kudyiwa uye inosvika pamatanho kubva pamazuva makumi matatu kusvika pagore.
2: Kunze Kunze Kwemidziyo uye Mhuri Midziyo
Wese munhu watinoziva kuti atumira kumhuri unit furniture anoti chaive chiitiko chisina maturo, mari uye chakakonzera kusamanikidza kusine chinangwa. Iyo yakasungirirwa yeTurkey yekungenisa uye mitero masisitimu anonzwisisika kunzwisisa pasi peakanakisa mamiriro uye anogara achimbomisa kugadzirwa kwemahombe makuru zvigadzirwa. Mari yacho haina kuisa parutivi mari, uye iwe unofanirwa kutenga fenicha nyowani pano.
Kunyange zvinhu zvichena zvichidhura, akawanda masosi anowanzo fambira mberi sarudzo dzakasarudzika uye kana uchitenga muhuwandu wopa chiratidzo. Imwe sarudzo kana uchitenga chivakwa muTurkey kuona dzimba dzinotengesa patsva kana chakashongedzwa zvakakwana.
3: Tora Inishuwarenzi yehutano
Chero ani muTurkey ari pasi pemakumi matanhatu nemashanu uye achigara pane rezinesi rekugara anofanirwa kuve nehutano hwekurapa. Iva zvazvingaita, hazvisi zvekumanikidza kweanopfuura makumi matanhatu nemashanu. Izvi zvakanaka muchiitiko chekuti iwe uve nemirwi yemari mubhangi, zvisinei pamukana wekuti kwete, mwedzi nemwedzi mutengo unoruramiswa, kunyangwe paine dambudziko kune manzwiro echokwadi erunyararo, nechikonzero chekuti sitiroko, coronary episode kana chiitiko chakakomba chinogona kumhanyisa kuita mapaundi mazhinji kwazvo. Vashoma vanhu vanofunga nezve zvakavanzika zvekurapa kufukidza nepo vamwe vachibhadhara kune yeruzhinji masimba SGK fomati.
4: Kushanda muTurkey
Kwenguva yakati kumashure, vazhinji vekunze vakashanda zvisirizvo. Mazuva iwayo hapachina. Chokwadi, kunyangwe muzhizha zviitiko zviitiko, zvinonetsa kuwana mutsva mutsara webasa semuiti pasina mvumo yakanakisa. Kunze kwekunge iwe ukaita mutsetse webasa nesangano repasirese kana kushanda mune midhiya, zvinonetsa kuteedzera bhizinesi repamutemo.
Vanhu vashoma vanosarudza kukurudzira Chirungu zvisinei kuti iite saizvozvo, inoda testamende yeEFL. Vamwe vanoshandira masangano anoteedzana pamwe neAegean neMediterranean, asi kune chikuru chikamu, iri ibasa reapo neapo. Saka kazhinji kutaura, usayambuke uye netarisiro yekukurumidza kutsvaga rumwe rudzi rwebasa. Muchiitiko chekuti iwe unofanirwa kushanda, chiise pamberi usati wabuda kunze uye vimbiso yezvibvumirano uye marezinesi ekushanda akamisikidzwa.
5: Fungidzira Kuvhunduka Kwetsika
Kuva pazororo kunoyerera pamusoro uye iri nzira refu kubva kune izvo zvakaita zuva nezuva hupenyu hwakafanana. Kubva pagore reKurban Bayram rinosanganisira kutendeuka kwembudzi kana gwai kusvika pasarudzo yemumwe wako wekuTurkey yekumhanyisa kwemazuva makumi matatu, iyo nzira yehupenyu inopenya zvechokwadi paunogara pano. Kubva pamichato panoshandirwa vanhu kungoita coke nenzungu, asi munhu wese anonyatsofamba husiku hwese kumuvakidzani ari padyo anoita DIY na30 pm Kukanda ruzha rwehutungamiriri, uye Bos Ver (usazvinetse) maitiro, uye kunze kwekunge iwe uchinja kosi uye gamuchira mamiriro ezvinhu zvaari, tsika stun icharatidza musoro wayo unotyisa.
6: Usaite Stereotype
Kune tsika, chikafu, nhoroondo, nhabvu, nyaya dzemitemo, mamiriro ekunze, uye hupenyu hwezuva nezuva, Turkey yakasiana kwazvo uye yakaoma kuumbiridza pasi pemuraira mumwe. MuAegean retreat yeDidim, zvinokonzereswa neBritish zvapera, kutenda kune yakakura-pat network, zvisinei kuAntalya, maRussia ndiwo musangano mukuru usina kujairika.
Saizvozvo, zvine mwero Konya, mudunhu rinotarisana neAnatolian haina kufanana neIstanbul. Zvingave zvakadaro, Izmir, guta rechitatu-rakakura reTurkey rakawana mukurumbira wehunhu hwaro hwenyika uye rinotungamira nzira mukugadzira uye mapatani. Ngazvive sezvazvingaite, iyo inokatyamadza kusiyanisa kunoshamisa kunobatsira kukura muchiedza chekuti kuongorora nzvimbo uye kutsvaga nezve chikafu nenhoroondo kunonakidza kwazvo.
Ramba uchienda, pane yedu rundown yemazano ekugara muTurkey ndeyekuzorora, kuzorora, uye kuzvipa iwe mukana wekusununguka. Rudzi rune zvakawanda zvekuunza patafura kune chero munhu anozvitora semusha wavo kubva kumba. Muchiitiko chekuti usati wasarudza kwaunofamba, chinyorwa ichi chinotaura nezvakakurumbira ex-pat zvinopesana zvinopa mamwe matipi uye nhungamiro. Pamusoro pezvo, tishevedze isu pamukana wekuti iwe unofunga kutenga chivakwa cheTurkey uye ungangoda kuziva nezvekuisa zviwanikwa mumusika wepasi.
Zvekutanga ruzivo rwe Citizenship neInvestment yeTurkey
Chishoma kudyara kwe Citizenship nekudyara muTurkey
USD 250,000 (real estate)
Ugari nekudyara kweTurkey
Ipfupi kana yakareba izwi Residence mvumo / Residence visa
Kuchengetedza nguva yeU Citizenship nekudyara kweTurkey
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa vagari vemuTurkey
Investment Sarudzo dze Ugari nekudyara kweTurkey
> Venture capital mari: Tenga $ 500,000 inokosha yeVC fund mugove
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweTurkey
MunaGunyana 2018 Turkey yakazivisa zviri pamutemo kuva mugari nechirongwa chekudyara chekukurudzira vekunze kuti vaise mari munyika uye vawedzere kusimudzira mune zvivakwa.
Hurumende yenyika yakaburitsa yakatemwa mitemo yekuva mugari wenyika ichideredza mari yekudyara kusimudzira mari yekunze yakananga mu gazette yepamutemo yakanyorwa musi wa 18 Gunyana 2018. Vatorwa, vanotenga zvivakwa kana kuisa mari mune chero sarudzo dzinotevera, sekutaurwa kwazvinoitwa nezvitsva. kodzero yekuva mugari weTurkey nekudyara.
Citizenship By chirongwa chekudyara muTurkey insite
> Real Estate: Tenga zvivakwa neUS $ 250,000 isina kutengeswa kwemakore matatu
> Bank Deposit: Deposit inosvika madhora mazana mashanu ezviuru mumabhangi eTurkey
> Hurumende zvisungo kana kuchengetedzeka: Tenga madhora mazana mashanu ezviuru zveTurkey zvisungo zvehurumende zvakavharirwa makore matatu
> Kugadzirwa kwemabasa: Shandisa vanhu vanosvika makumi mashanu
Mutengi kutsigira Citizenship nekudyara kweTurkey
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents kuTurkey uye Citizenship ne Investment Lawyers yeTurkey inopa vatengi uye mhuri dzavo muTurkey nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuTurkey, kugara nekudyara kubva kuTurkey uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuTurkey kana Golden Visa kubva kuTurkey kana ugari nekudyara kubva kuTurkey kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuTurkey, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kumisikidza kambani mu Turkey kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muTurkey uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari uye zvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuTurkey uye sekondari pekugara.
Kutsigira Kwakakosha kwevagari veTurkey:
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa yeTurkey, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeTurkey, inokwanisika mari yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuenda kuTurkey, inokwanisika Citizenship nekudyara vanachipangamazano kuTurkey, inokwanisika Citizenship neinvestment magweta eTurkey uye inokwanisika yekuenda kune dzimwe nyika kubvunza yakasimba kuTurkey
Ugari nekudyara kubva kuTurkey kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muTurkey kune 37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuTurkey kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuTurkey kuenda ku106 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuTurkey.
Goridhe visa zvirongwa muTurkey kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuTurkey kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuTurkey kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuTurkey kuenda ku106 Nyika.
Citizenship yakasarudzika nerutsigiro rutsigiro kune vanhu uye mhuri.
Ugari neInvestment yeTurkey kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muTurkey nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana zvakanaka kudzoka mukudyara muTurkey, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaita kwavo kweCitizenship nekudyara kweTurkey. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muTurkey vane rekodhi rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muTurkey, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa real estate dzimba dzekugara zvirongwa zveTurkey nemari in real estate muTurkey.
Unoda kuziva - Turkey Citizenship neInvestment
Citizenship neInvestment Gweta kuTurkey ichapa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuTurkey. Yedu yakajairwa masevhisi e Citizenship neInvestment kuTurkey inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti ubve kuTurkey kana kuenda kuTurkey, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati warumbidza Citizenship nekudyara kweTurkey kune vatengi kuti vawane Citizenship yeTurkey uye kudzora njodzi yekuramba.
Zvichienderana neyakafanira kushingairira mushumo weTurkey, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi nehukama hwako nekudyara kunyorera kuTurkey isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile emagwaro Ugari nekudyara kunyorera Turkey. Magweta edu akasarudzika e Citizenship nekudyara kweTurkey uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera kweTurkey kwagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveTurkey.
Duration: 1 mwedzi
Kana chikumbiro chako cheU Citizenship nekudyara kweTurkey changobvumidzwa, tinogovana newe mashoko akanaka tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services muTurkey kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muTurkey:
Citizenship nebasa rekudyara kweTurkey hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuTurkey.
Citizenship nemapurogiramu ekudyara kweTurkey hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muTurkey kana maindasitiri espionage emapurogiramu ekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuTurkey.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kweTurkey hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muTurkey.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara yeTurkey haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muTurkey.
Citizenship nebasa rekudyara kweTurkey haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muTurkey.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweTurkey haruwanikwe kune vanhu veTurkey vanoita mukutengesa, kuchengetedza muTurkey, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara yeTurkey haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa yeTurkey haisi yezvitendero uye masangano avo muTurkey.
Citizenship nebasa rekudyara mu Teki haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muTurkey.
Ugari Hwedu magweta muTurkey haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muTurkey.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veTurkey neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muTurkey kubvumidzwa kunyorera Citizenship nekudyara muTurkey.
Ugari nekudyara muTurkey nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa hukuru hwehukama nerutsigiro rwekudyara muTurkey yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muTurkey.
Inotsigirwa nehukama hwepasi rose neyakavanzika ruzivo uye zvinodiwa nemutemo zveTurkey, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hedu Citizenship nekudyara masevhisi kuTurkey inopa yakachipa mitengo, ine yakanakisa inokwanisika budiriro yeTurkey.
Isu takatora makore echiitiko kune hunyanzvi hwehukama kuenda kuTurkey kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuTurkey.
Ruzivo Rwehugari nevemari vanokumbira mari kuTurkey nevamiriri vepamutemo veTurkey vanopa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta uye vamiririri veTurkey kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Usati uri Citizenship yeTurkey uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuTurkey
Isu tine ruzivo rwepasi rose mu Citizenship nekudyara kusanganisira Turkey, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Citizenship yako nekudyara kuTurkey ikakundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, takagadzirira nehurongwa B.
Verenga mutengo weCitizenship neInvestment kuTurkey
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweTurkey ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri nezera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veTurkey, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchasanganisira, kunosanganisira, mutengo weUgari nehurongwa hwekudyara kweTurkey nedzimwe mhosva.
mhando vhiza yeTurkey
Maitiro Ekubvumidza Basa kuTurkey
Kwekugara kwenguva pfupi muTurkey
Permanent Residence muTurkey
Embassies uye Consulates yeTurkey
Ugari neInvestment muTurkey uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muTurkey nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira pamwe nemhuri yako kuTurkey nekudyara mari, isu semumwe wako kuTurkey, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muTurkey nemitengo inodhura.
Kunze kweCitizenship nekutsvaga kwekudyara kuTurkey, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR mabasa zvakare muTurkey, ayo iwe ausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano veTurkey ichitiita one-stop shop yeTurkey nenyika 106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye nepasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuTurkey mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kweTurkey nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muTurkey nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muTurkey kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muTurkey yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muTurkey
Chero ani investor anotamira kuTurkey angazoda akaundi yako kubhengi muTurkey uye account yebhangi yekambani muTurkey, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Payment gedhi muTurkey
Kana iwe uchida kubvunza muTurkey, ye mhinduro dzemadhijitari muTurkey senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muTurkey kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Turkey kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muTurkey kutanga pakarepo muTurkey.
HR Services muTurkey
Our kambani yevashandi muTurkey inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muTurkey vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeTurkey
Bhizinesi foni masystem eTurkey pamwe ne nhamba dzeTurkey Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muTurkey
Accounting, kushingairira kwakaringana muTurkey uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muTurkey
Setup bhizinesi muTurkey
Mushure meCitizenship nekudyara kuTurkey, setup bhizinesi mu Teki.
Isu tinopa pazasi zvataurwa IT mhinduro muTurkey
Kugadzira Webhu muTurkey
Ecommerce Kuvandudza muTurkey
Webhu kuvandudza muTurkey
Kuvandudza kweBlockchain muTurkey
App Kubudirira muTurkey
Software Kubudirira muTurkey
Magweta e Citizenship neInvestment muTurkey
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro kuTurkey uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuTurkey, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuTurkey ine vamiririri vakanakisa vekupinda zvakare muTurkey, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa mutengi sevhisi yeTurkey ne kujekesa nzira dzekudyara mhinduro kune vanhu veTurkey nemhuri dzavo. Hwedu Hugari nevekudyara timu yeTurkey inopa zvakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuTurkey, pamvumo yako yekugara muTurkey inogamuchirwa.
Simba regweta reTurkey rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako ne Citizenship nevamiriri vezvekudyara muTurkey. Kana iwe uri muTurkey kana kuronga kushanyira Turkey, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadharise zvimwe kuti tiwane Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweTurkey iri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeTurkey. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weTurkey.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment muTurkey
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muTurkey?
Kugara nekudyara kuTurkey, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara kweTurkey kuburikidza nekudyara muhupfumi hweTurkey kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuTurkey, ugaro nehurongwa hwekudyara kweTurkey. inotsigirwa nekugara nemabasa ekudyara mari kuTurkey, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muTurkey, kugarisana kwakanakisa nemagweta ekudyara muTurkey uye kugarisana kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuTurkey, vanoshanda pakunogara zvakanaka nevamiriri vezvekudyara muTurkey, uye akanakisa mafemu ekubvunza nezvekupinda munyika. muTurkey.
Kugara nemabasa ekudyara kweTurkey | Kugara nevamiriri vemari muTurkey | Kugara patsva nemagweta eInvestment muTurkey | Kugara nemagweta ekudyara muTurkey | Kugara nevekudyara varidzi veTurkey
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muTurkey?
Ugari nekudyara kuTurkey, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweTurkey kuburikidza nekudyara muhupfumi hweTurkey kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muTurkey. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuTurkey, ugari nehurongwa hwekudyara kweTurkey inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuTurkey, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muTurkey, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muTurkey uye hukama hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kweTurkey, vachishanda pahukama hwakanakisisa nevamiririri vezvekudyara muTurkey, uye akanakisa mafemu ekubvunza nezvekupinda munyika.
Affordable Investor immigration services yeTurkey | Vanodhura vanopinda munyika vanokumbira muTurkey | Vanodhura vatyairi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muTurkey | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muTurkey | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muTurkey | Affordable immigration law firms kuTurkey
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muTurkey?
Yechipiri pasipoti muTurkey, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weTurkey kuburikidza nekudyara muhupfumi hweTurkey kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuTurkey, yechipiri pasipoti chirongwa cheTurkey chakatsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eTurkey, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muTurkey, magweta echipiri epasipoti muTurkey uye akanakisa echipiri mapasipoti ekutaurisa kuTurkey, achishanda pane akanakisa echipiri mapasipoti vamiririri muTurkey, uye akanakisa mafemu ekubvunza vekupinda muTurkey.
Yechipiri pasipoti masevhisi eTurkey | Chechipiri pasipoti vamiririri muTurkey | Yechipiri mapasipoti magweta muTurkey | Yechipiri mapasipoti magweta muTurkey | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuTurkey
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muTurkey?
Ndarama vhiza muTurkey, inogona kutsanangurwa se, kuwana pekugara mvumo yeTurkey kuburikidza nekudyara muhupfumi hweTurkey kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera yegoridhe vhiza kuTurkey, goridhe vhiza chirongwa cheTurkey inotsigirwa ne goridhe vhiza masevhisi eTurkey, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muTurkey, akanakisa egoridhe vhiza magweta muTurkey uye akanakisa endarama vhiza varairidzi veTurkey, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muTurkey, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa mafemu muTurkey.
Goridhe visa services yeTurkey | Ndarama vhiza vamiririri muTurkey | Magoridhe vhiza magweta muTurkey | Magoridhe vhiza magweta muTurkey | Goridhe vhiza varairidzi veTurkey
Ndechipi chidiki chekudyara kweCitizenship nekudyara muTurkey?
Kashoma kudyara kweCitizenship nekudyara muTurkey ndeye USD 250,000 (real estate).
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuTurkey rweCitizenship nekudyara?
Ehe, gweta redu muTurkey nevamiriri muTurkey vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara muTurkey.
Ugari neInvestment kuTurkey inodhura?
Mutengo weUgari neInvestment kuTurkey uye Citizenship neinvestment fund zvinodiwa kuTurkey ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza muripo weCitizenship neInvestment kuTurkey, isu tinopawo mijenya yekumwe kutsigira kweCitizenship neInvestment mhinduro.
Ndeipi nyika vagari vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuTurkey kana investor visa kuTurkey?
Citizenship kubudikidza nekudyara masevhisi kune anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mashoma mienzaniso ndeye Citizenship nekudyara kuTurkey kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuenda kuTurkey kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kuTurkey kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuenda kuTurkey kubva kuSouth America, Citizenship nekudyara kuTurkey kubva kuMalaysia, Citizenship nekudyara kuTurkey kubva kuBangladesh, Citizenship nekudyara kuTurkey kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kuTurkey kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kuenda kuTurkey kubva kuNepal, Citizenship nekudyara kuTurkey kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kuTurkey kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance yeTurkey
Kumbira kubvunza Mahara kwehukama hwako neInvestment kuTurkey
Mazwi akakosha mu Ugari neInvestment yeTurkey
Yepamutemo webhusaiti yeSwitzerland Tourism
Swiss Federal Dare
Ankara Kutamisirwa AG
Nyika dzakatsigirwa dzeCitizenship nekudyara
Link to Dhipatimendi Rekupinda muTurkey , Inotarisira kuumba marongero ekuchimbidza Kufamba kwevanhu muTurkey
Citizenship kubudikidza Investment kunyika makumi matatu nemasere! Taura nesu